ငြိမ်းစေလင်း: ၁။ ဖာလွန်ုကောင်းကို ဘာ့ကြောင့်စိတ်ဝင်စားသလဲ ?
The Poems of Doctor Zhivago (4)
တဏှာ ရှင်းတမ်း (11)
ဓမ္မဝိဟာရီ နိဒါန်း (2)
ဖာလွန်ကောင်း ဘယ်လဲ? (21)
ဗုဒ္ဓ ဘုရား သာသနာနှင့် မြန်မာပြည် (9)
ဘာသာတရားက ပေးသော ဆုလာဘ် (16)
မဟာပေါဌက ပထမ အစု အပိုင်း(၁) (8)
အသံ မှတ်တမ်း (7)
ဓမ္မစကြာလည်းစေသော် အမည်ရှိတဲ့ ဟောပြောချက်ကို အကြောင်းအားလျော်စွာ လေ့လာခွင့် ရခဲ့တယ်။ ဓမ္မစကြာဆိုတာကို ဗုဒ္ဓဘုရားက တရားဦးအဖြစ် ဟောခဲ့တာကို သိနေပြီးရှိတော့ ဘုရားရဲ့ ဓမ္မစကြာနဲ့ များ ထပ်နေမလား၊ အဲဒါကို ဘယ်လိုခြားနားအောင်များ သိနေမလားလို့စိတ်ဝင်တစား ဖြစ်ရတယ်။ ပြီးတော့ ... ...
ဓမ္မစကြာ လည်စေသော် ဆိုတဲ့ သည်အမည်ဟာ ဘာသာပြန်သူရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိအောင် မှည့်ခေါ် ထားတဲ့ အမည် မဟုတ်တာ သိရတယ်။ သူရဲ့ မူရင်းအမည်က ဖာလွန်ကောင်း လို့ ဖြစ်တယ်။ ဖာ- ဆိုတာ မြန်မာလို တရားဓမ္မ၊ လွန်- ဆိုတာက စက်ယန္တရား၊ ကောင်း- ဆိုတာက လည်ပတ်ခြင်းလို့ရတယ်။ သုံးလုံးပေါင်းလိုက်တော့ ဓမ္မစကြာလည်ခြင်း ဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်။ ဓမ္မစက် လည်ပါစေ၊ ဓမ္မစက်လည်စေသား ဖြစ်လာတာကတော့ အဲသည် ၀ါကျဆိုင်ရာ ၀ိဘက် အပြုအပြင် အရပဲ ဖြစ်မှာပါ။
ဓမ္မစကြာလည်စေသော်ကို ညွှန်ပြသူဟာ လီဟုန်ကြည် ဆိုတဲ့ အမျိုးသားတဦး ဖြစ်တယ်။ သူဟာ အသက် ငါးဆယ်(၅၀) ၀န်းကျင်ရှိ တရုပ်အမျိုးသားပဲ။ သည်ညွှန်ပြချက်ဟာ တရုပ် ဓမ္မ ပရိသတ်ကို ညွှန်ပြတာတွေဖြစ်တယ်။ သူ့ ကို ယုံကြည်သူပေါင်း ဆယ်ကုဋေ လောက်ရှိတယ် လို့ကျော်ကြားတယ်။ ဒါကလည်း သည်ညွှန်ပြချက်ကို လေ့လာဖို့ကြီးမားတဲ့ ဆွဲဆောင်မှုပဲ။
Labels: ဖာလွန်ကောင်း ဘယ်လဲ?
စား၊ ဝတ်၊ နေရေးတွေအတွက် ရုန်းကန်ရင်း အချိန်တွေပေးနေရတာမို့ဘလော့င်္ဂါလောကထဲ ခြေတလှမ်းသာ ချဖြစ်တဲ့အတွက် နားလည် ပေးနိုင်ကြပါစေလို့... ... ...